MATAA DHUKKUBBII (HEADACHE) AKKAMIIN OFIRRA HIR'ISNA?
1. Koomputerooraa fi moobayilii irraa gidduu gidduutti boqonnaa fudhachuu.
2. Bishaan fi dhangala'aa biroo sirriitti dhuguu.
3. Waan hojjannu irraa boqonnaa fudhachuu
4. Nyaata altakkaatti baay'ee nyaachuu irra xixiqqeessanii itti deddeebi'anii nyaachuu.
5. Uffata bishaan qor'aan cuuphanii adda ofiirra kaa'achuu.
6. Gaafa qaama dhiqannu bishaan ho'aadhaan dhiqachuu.
7. Alkoolii dhuguu dhiisuu ykn baay'ee xiqqeessanii dhuguu.
8. Buna dhuguu (Guyyaatti siinii ykn Finjaala afur haga shanii kan hin caalle).
9. Sochii qaamaa yeroo yerootti hojjachuu.
10. Gaafa konkolaataan deeman haga danda'an gara fuulduraa taa'anii deemuu.
11. Aduu keessa yeroo dheeraaf deemuu ykn taa'uu dhiisuu.
12. Mastiikaa yeroo dheeraaf (yeroo baay'ee) alanfachuu irraa of qusachuu.
Bagaa Nagaan Ayyaana Du'aa Kahuun Isin Gahe.
Fayyaa Keessaan Eeggadhaa
MATAA DHUKKUBBIIN yaala hatattamaa akka barbaadu agarsiisan (RED FLAGS OF HEADACHE):
1. Mataa dhukkubbii jalqabee daqiiqaa xiqqoo keessatti dhukkubbiin isaa garmalee cimee sadarkaa obsuu hin dandeenyerra nama geessisu.(Thundercalp headache)
2. Mataa dhukkubbii haala taa'umsa qaamaa (positional change) irraan garmalee namatti cimu ykn jijjiiramu.
3. Mataa dhukkubbii sochii qaamaa, waa hojechuu (exertion) qufa'uu, haxxifachuu fi kkf irraan nama eegalu.
4. Mataa dhukkubbii cimaa haaraa (kan duraan hin jirre) keessumaa namoota waggaa 50 olii yoo mudatu.
5. Mataa dhukkubbii yeroo mara buqqee mataa (head) irraa bakka tokko deddebi'ee dhukkubu.
6. Mataa dhukkubbii walitti fufaa (kan gidduutti hin fooyyofne ykn hin dhiifne).
7. Mataa dhukkubbii duraan dhukkubbii xiqqoo qabu fi daddafee deebi'ee hin dhufne yoo haala jijjiiratee garmalee haala duraa caalaa namatti yoo cimaa deemu.
8. Mataa dhukkubbii mallattoowwan biroo kan akka dhaqna gubaa, sochii dadhabuu kutaa qaamaa akka harkaa ykn miilaa, ulfaatina baay'ee hir'isuu of biratti qabatee deemu.
Dhukkubbii dugdaa namoota hedduutu qaba. Keessumaa yoo umuriin dabalaa deemu, carraan dhukkubbii dugdaa qabaachuu illee akkanuma dabalaa deema. Mee haala ykn mala kama fayyadamnee of gargaaruu dandeenyaa?
1. Yeroo dheeraaf siree irra boqochuu dhiisuu. Yeroo dheeraaf siree irra boqochuun dhukkubbii dugdaa namatti caalsisa waan taheef yoo dandahame sa'aa sadii ol siree irra ciisuu dhiisuu qabna.
4. Waan dilallaa'aa ta'e yokaan ho'aa tahe bakka dhukkubu sanarra kaa'uun dhukkubbiin akka itti dhaggeeffatu taasisa. Lameen keessaa kan sirriitti nutti fooyyesse fayyadamna.
5. Yoo rafnu yoo dugdaan ciisne tahe boraatii jilba keenya jala; yoo cinaachaan ciifne tahe ammoo boraatii jilba keenya lamaan gidduu kaa'achuun nutti fooyyessa. Garaadhaan ciisuun ammoo dhiibbaa qaamaa dugdarra kaahuudhaan dhukkubbii nutti cimsa.
7. Kana hunda cinaatti ogeessa fayaa bira deemanii ka'umsaa isaa baranii gagaarsaargachuun gaariidha.
Dogoggora ykn miidhama AARII (anger) irraan dhufe irra aanuuf akkamiin of tasgabbeessuu dandeenya?:
1. Jalaqaba waan hundaa, utuu hun tasgabbaa'iin waa DUBBACHUU dhiisuudha.
2. Erga xiqqoo tasgabboofnee aarii keenya IBSACHUU qabna. Akka aarre dhokfachuun gaarii miti. Kanaaf ofii keenyaa fi hiriyyaa baay'ee amannuutti haasa'uudha.
3. Yeroo aarii keenya ibsannu yeroo mara jecha "ANI" (I) jedhu fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf, "Inni kan na aarse" ykn "Isheen kan na aarsite" jechuu irra, "An kanin aaree," jedhanii haasa'uun gaariidha.
4. SOCHII QAAMAA (physical exercise) xiqqoo hojachuun aariin keenya akka tasgabboofnu taasisa.
5. Waan hojjannu ykn yaadnu irraa yeroo xiqqoof BOQONNAA fudhachuu qabna.
6. Waan nu aarsurratti xiyyeeffachuu dhiifnee maaltu aarii kanaaaf FURMAATA ta'uu danda'a jennee dafnee yaaduu jalqabuu qabna.
7. DHIIFAMA gochuun aarii irraa fayyuuf aangoo guddaa qaba. Kanaaf dafanii dhiifama gochuun baay'ee gaariidha.
8. Haga danda'an BAACUU fi TAPHACHUUN hedduu nama gargaara. Akka aarte utuma beektuu baacuu fi taphachuun gaariidh.
9. MAALOOTA TASGABBII (relaition methods) fayyadamuudha. Waantoota akka meditation , fi jechoota dubbii salphisan kan akka "kun waal salphaadha" (take it easy) jedhan irra deddeebanii fayyadamuudha.
10. Dhunarratti yoo waan hundaan tasgabbiin dhibe, maatii, nama nutti dhiyaatu, ogeessa sammuu, abbootii amantii fi kkf GARGAARSA gaafachuudha.
You have poked Fayyaa